INGIRIISKA: Tirada soomaalida Ingiriiska ee qaba xanuunka dilaaga ah oo la Shaaciyey | Somaliska
Wararka ka imanaya dalka Ingiriiska ayaa sheegaya in hay’adda u qaabilsan adeegga caafimaadka Qaranka gobalka England ee Igiriiska shaacisay, tirada dadka lugu sheegay soomalida ee qaba cudurka dilaaga ah ee Aydhis-ka. Cudurkan ayaa hey’adu sheegtay in xilliyo kala duwan ay dadkaasi qaadeen cudurkan.
Warbixin ay soo saartay hey’adaasi NHS ayaa farta ku fiiqday in 683 qof oo sheegay inuu asalkooda soomaali yahay laga helay cudurkaasi dilaaga ah kmuddadii u dhexeysay sannadihii 2000 ilaa 2016-kii. Waxaa kaloo lagu xusay warbixinta in 310 qof oo ka mid ah dadkaasi yihiin rag, halka 373 yihiin haween, kuwaas oo badankooda (70%) qaadeen xanuunkaasi wixii ka dambeeyey sannadkii 2003-dii. Warbixinta ayaa sidoo kale tibaaxday in 5% dadkaasi ah ay da’dooda ka hooseyso 15-sanno, halka 10% ka mid ahina ay da’dooda u dhexeyso 15 sanno ilaa 24-sanno.
Sanadkii ina dhaafay ee 2016-ka ayey hey’adani sheegtay in cuddurkaasi laga helay haween tiradoodu gaareeyso 28-qof, kuwaas oo sheegtay inay asal ahaan ka soo jeedaan Soomaaliya, haweenkan ayaa da’doodu u dhexeysaa 14 ilaa 19-jir. Ugu dambeytiina waa markii ugu horreysay oo ay Hay’addaasi caafimaadka qaabilsani (NHS) shaaciso xogta tirada soomaalida gobolka England ee Ingiriiska kuwaas oo haleelay cudurka dilaaga ah ee Aydhish-ka. Su,aashuse waxeey tahay sidee ayuu cudurkani u haleelay da’da aan shan iyo tobban sanno gaarin ee ay warbixintani sheegeysi?